पासाङ ल्हामुको साहस
Tuesday, 23 April 2013 10:16	सरिता वाग्ले
नेपाल आमाले आफ्नो पवित्र गर्भबाट समय समयमा वीर पुरुषहरुको मात्रै होइन, वीरङ्गना नारीलाई पनि जन्म दिएकी छिन्। ती वीरङ्गना नारीमध्येकी एक हुन्- पासाङ ल्हामु शेर्पा। जसले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी राष्ट्रहितका खातिर तमाम पुरुषलाई चुनौती दिँदै सर्वप्रथम सगरमाथाको आरोहण गर्ने जस्तो साहसिक एवं जोखिमपूर्ण कार्य गर्न सफल भइन्। उनले विं. सं. २०५० साल वैशाख १० गतेका दिन सगरमाथाको सफल आरोहण गरी तमाम महिलालाई सगरमाथाको यात्रामा होमिन शंखघोष गरेकी थिइन्। यसरी उनका पौरखी पाऊहरुले प्रथमतः सगरमाथा चुम्दै आफ्नो मातृभूमि ‘नेपालको' शीर उचो पार्ने कार्यमात्र गरिनन् बल्की तमाम महिलाको सान विश्वमाझ चम्काउन पुगिन्।
Monday, 22 April 2013 10:49	देवी सापकोटा
नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने छोटो समयमा उल्लेख्य परिर्वतन भएको र सबैले यही महसुस गरेको क्षेत्र सामुदायिक वन नै हो। चोरी तस्करीले गर्दा डाँडा पाखा पूरै रातो माटो देखिने ती ठाउँ अहिले हराभरा वनमा परिणत भएका छन्। समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि वनको मुहार फेरिएको हो भन्नेमा कोही पनि हिच्किचाउनुपर्दैन। १७ हजारभन्दा बढी वन समुदायका नाममा हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने कतिचाहिँ हस्तान्तरणकै प्रक्रियामा छन्। अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा समावेशिताको अनुभूति त्यति गर्न नपाएका महिलाले सामुदायिक वन समितिहरुमा भने ठाउँ पाएका छन्। विधानले नै ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम भएकाले बल्ल महिलाले त्यसमा ठाउँ पाएका हुन। अवसर र काम गर्ने वातावरण पाएको खण्डमा महिलाले कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने राम्रो उदाहरण हो यो। कहीँ कतै महिलाले लिएको नेतृत्वमाथि टिप्पणी र विरोधका स्वरहरु पनि आए तर महिलाहरु त्यसबाट हटेनन् र चुनौतीका रूपमा पनि त्यसलाई लिए।
लथालिंग स्थानीय सरकार
Monday, 22 April 2013 10:48	दीपेश घिमिरे
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष गाउँ विकास समितिमा अरबांै रुपियाँ पठाइरहेको छ। यसरी पठाएको रकमको सदुपयोग हुन नसक्दा उपलब्धिहीन हुँदै गइरहेको छ। संस्थागत सुधार र स्थानीय सरकारको लोकतान्त्रिकीकरण नगरिकन ससर्त र निसर्त अनुदान रकममात्र बढाउँदै जाँदा त्यो रकम उपलब्धिहीन हुँदै गएको छ। समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन निस्त्रि्कय बनेको छ। यसैगरी समय-समयमा नेपाल सरकारले बनाएर जारी गरेका निर्देशिका तथा कार्यविधिको गाविस सचिव तथा स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुले ठाडो उल्लंघन गरिरहेका छन्।
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य मुलुकका निम्ति जति भ्रमपूर्ण र अन्योलग्रस्त छ, त्यति नै महिला मुक्तिका निम्ति पनि सुखद् देखिँदैन। खासगरी खिलराज रेग्मी सरकारको गठनलगत्तै मुलुकको राजनीतिमा जुन प्रकारका आशा उत्पन्न भएका थिए, अहिले निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा भइरहेको ढिलाइ र दलबीचको आपसी विवादले त्यो उत्साहलाई शिथिल बनाइदिएको छ। शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष नपाउँदा मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजिरहेको छ।
Sunday, 21 April 2013 10:58	ढाकाराम सापकोटा
शिक्षा, स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन। यी आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर राज्यले नागरिकप्रति गर्नुपर्ने कुनै पनि दायित्व पूरा गरेको छैन। त्यसैले शिक्षा आज व्यापारमा परिणत भएको छ। त्यसैले त नेता, व्यापारी, नेपाल सरकारको उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूसमेत शिक्षाको व्यापारमा लागेका छन्। जब जब नयाँ शैक्षिक वर्ष आउँछ, तब तब निजी विद्यालयले फारम वितरणमा लिने शुल्क, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्कलगायत् धेरै कुरामा अभिभावक र त्यस्ता विद्यालय सञ्चालकबीच एक प्रकारको शित युद्ध नै चल्ने गरेको छ। राज्यले नीति बनाउँदा सबैलाई शिक्षा उपलब्ध गराउने भने पनि राज्यकै नीति निर्माताबाट शिक्षाको व्यापार गरेर सर्वसाधारणको पहँुचभन्दा टाढा पुर्याउउने काम भइरहेको छ।